एमाले एकतामा पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन कति सहज ? - Kohalpur Trends
२ जेठ, काठमाडौं । दुई अलग संगठनात्मक संरचनामा चलिरहेको नेकपा एमालेलाई एउटै बनाउन आइतबार दश सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीच सिंहदरबारमा भएको ‘वान अन वान’ छलफलबाट दुवै तर्फका पाँच/पाँच जना रहने गरी कार्यदल बनाइएको छ ।
तर सार्वजनिक रूपमा भने दुवै पक्षका नेताहरू यसबारे बाेल्न चाहँदैनन् । ‘यो ठूलो महत्वको कुरा होइन । पार्टी एकता बचाउन जरूरी छ । कार्यदलमा रहेका साथीहरुले सबै नेताहरुको परामर्श लिएरै उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउने हो’, ओली तर्फका एक नेता भन्छन् । २३ फागुन यताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाहिं बादल सहित माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू पुनर्स्थापित एमालेको कलहको एक महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ रहेको लुक्दैन ।
Previous Previous post: भूराजनीतिक संकेत : के भारतलाई नेपालमा तत्काल चुनाव चाहिएको छ ?
Next Next post: कोरोना संक्रमणबाट वीरगञ्जमा थप ११ जनाको मृत्यु